Google Mifananidzo inovandudza backup yekumhanyisa kumhanya | IPhone nhau
Imwe yeakanakisa, kana asiri iwo emahara emahara emaneja emafoto ayo atinogona kuwana muApp Store, Google Mifananidzo, achangobva kuvandudzwa kuwedzera basa nyowani rinofadza vashandisi veichi chishandiso. Google Mifananidzo yave nzira yakanakisa kuICloud, kuwedzera pakusununguka, kukwanisa kuchengeta yega yega uye yega yemifananidzo nemavhidhiyo ayo atinotora nefoni yedu, chero bedzi mapikicha acho anopfuura 16 mpx (neiyo iPhone kwete pane dambudziko) uye kuti mavhidhiyo haasi mu4k mhando (zvinoshandurwa zvoga kuita 1080 kana tisingade kuti vashandise nzvimbo yedu yekuchengetera).
Mushure mezuva rawakafanirwa kushandisa yako iPhone kutora yakawanda mifananidzo, pamusoro pekutora iyo isinganzwisisike vhidhiyo, iwe unoisa yako iPhone kuchaja kuitira kuti mukuita uchishandisa iyo Wi-Fi kubatanidza mifananidzo yese nemavhidhiyo izvo zvatakagadzira. Maitiro aya, zvichienderana nenhamba yemifananidzo nemavhidhiyo, inogona kunonoka, zvirinani kusvika zvino.
Google yakangovandudza iyo app kuvandudza iyo yekukwira system nekuda kweiyo yakafanana kukwira, iyo inokutendera iwe kurodha akati wandei mafaera pamwe chete panzvimbo yekuenda rimwe nerimwe sepakutanga. Asi zvakare, vakomana paGoogle vangogadzirisa mashandiro enzvimbo iyo mifananidzo yatorwa. Mushure meichi chiitiko, kana uchidzvanya panzvimbo yemufananidzo, iyo Google Mepu application ichavhura otomatiki kuratidza chaiko nzvimbo kwayakatorwa.
Mifananidzo yeGoogle inowanikwa kuti utorwe mahara kuburikidza neApp Store uye inotibvumidza kuti tigare kopi yeedu rese reel yemahara pasina kudzikisira nzvimbo yatakatenga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Google Mifananidzo inovandudza backup yekumhanyisa mhanyisa
BeatsX yave kuwanikwa nemwedzi mitatu yemahara yeApple Music